सुनको भाउ फेरि चम्किँदै, दुई दिनमै बढ्यो तोलामा रु. १७ सय Bizshala -
आपतमा करोडौं लूटेपछि मात्र सरकारको होस खुल्यो, चार्टर उडानमाथि प्रतिबन्ध
काठमाण्डौ र भक्तपुरमा फेला परेका संक्रमित को हुन् ?
लकडाउन अविधिभरको कर मिनाहाको माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन
मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग: इनरुवा खण्डको काम शुरु
सुनको भाउ फेरि चम्किँदै, दुई दिनमै बढ्यो तोलामा रु. १७ सय
काठमाण्डौ । लगातार ओरालो लागेको सुनको भाउ दुई दिनमै तोलामा १ हजार ७०० रुपैयाँले बढेको छ ।
तोलामा हिजो बुधबार ६०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज बिहीबार फेरि एकैदिन १ हजार १०० रुपैयाँले बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा १ हजार १०० रुपैयाँले बढेर सुन प्रतितोला छापावाल ७० हजार ९०० र तेजाबी ७० हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो बुधबार तोलामा रु ६०० ले बढेर सुन प्रतितोला छापावाल ६९ हजार ८०० र तेजाबी ६९ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
लगातार दुई सातादेखि सुनको भाउमा गिरावट आइरहेको थियो । पहेँलो धातु सुनको भाउ फेरि आज मंगलबार एकैपटक तोलामा ८०० रुपैयाँ घटेको थियो । मंगलबार तोलामा ८०० रुपैयाँले घटेर सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ६९ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी ६८ हजार ९०० मा झरेको थियो ।
कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७१ हजार र तेजाबी ७० हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । अघिल्लो दिन आइतबार सुन तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाल ७१ हजार २०० र तेजाबी ७० हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाडपर्वको सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाली बजारमा सुनको भाउ भने लगातार घटिरहेकोकै बेला बुधबार र बिहीबार तोलामा १ हजार ७०० रुपैयाँले बढेको हो ।
गत भदौ ९ गते नेपाली बजारमा सुनको भाउ हालसम्मकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो । त्यो दिन सुन प्रतितोला छापावाल ७३ हजार ५०० र तेजाबी ७३ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको थियो । सुनको भाउ उच्चतम विन्दुमा पुग्दा कारोबार प्रायः ठप्प भएको थियो । अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, जम्मु–काश्मीर विवाद र डलरको मूल्य नेपाली मुद्राभन्दा बलियो हुँदा सुनको भाउ निकै बढेको अर्थ विश्लेषकहरुले बताएका थिए ।
gold price up
सहयोगी बैंक १ः०.९१७५ को सेयर अनुपातमा सिटिजन्समा बिलय हुन तयार
कोभिड-१९ अपडेट: थप संख्या ३२३, कुल संख्या ३२३५, कुल डिस्चार्ज ३६५, मृत्यु १३
काठमाण्डौ र कमलविनायकका ५ जनामा कोरोना संक्रमण
कोरोना संक्रमणका कारण थप २ को मृत्यु
आरडिटी किटले फेरि झुक्यायो, चार दिनअघि मृत्यु भएकामा कोरोना पुष्टि
चितवन र बाजुरामा २ को मृत्यु, कोरोनाको आशङ्का
सन्त्रासका बीच सुनको भाउ लगातार बढ्दै
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसको सन्त्रासका बीच...
सुनको भाउ आज पनि बढ्यो, प्रतितोला कति पुग्यो?
काठमाण्डौ। नेपाली बजारमा यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको...
सुनको भाउमा निकै उतारचढाव, यो साता तोलामा रु. ३ हजार घट्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा यो साता सुनको भाउमा निकै उतार चढाव भएको...
सुनको भाउमा भारी गिरावट, आज एकैदिन तोलामा रु. १५ सय घट्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा पहिरो जाने क्रमले बिहीबार पनि निरन्तरता...
सुनको भाउ एक महिनाअघिकै अवस्थामा झर्यो, ७ दिनमा रु. ६२ सय घट्यो
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउमा ठीक एक...
सुनको भाउमा फेरि भीषण पहिरो, आज एकैदिन तोलामा रु. २ हजारको
काठमाण्डौ । सुनको मूल्यमा आज मंगलबार फेरि भारी गिरावट आएको...
सुनको मूल्यमा लगातार खसेको पहिरो थामियो, आज कतिले बढ्यो?
काठमाण्डौ। सुनको मूल्यमा लगातार खसिरहेको पहिरो थामिएको छ। यो...
सुनको मूल्यमा पहिरो निरन्तर, आज पनि तोलामा एकैपटक रु. १५ सय
काठमाण्डौ । सुनको मूल्यमा पहिरो खस्ने क्रमले निरन्तरता पाएको...